Aostralia: Mitaky Ny Zo Amin’ny Fampinonona Zaza Eny Imasom-bahoaka Ireo Mpomba Ny Fampinonoan-dreny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2013 6:31 GMT
Any Aostralia, naka ireo filazam-baovao sy ny arabe ireo mpomba ny fampinonoan-dreny mba hiarovana ny zo fahafahana mampinono ny zaza eny imasom-bahoaka. Fihetsiketsehana indroa miantaona no natao taorian'ny fandroahana an-dRamatoa Liana Webster, reny iray nampinono taminà toerana misy dobo filomanosana ho an'ny daholobe, ny 12 Janoary 2013. Araka ny nitateran'ny filazam-baovao ao an-toerana azy:
Nanao fampinonoana faobe ireo reny tao SUNSHINE Coast mba handefasana hafatra iray mazava fa zo ara-dalàn'izy ireo ny mampinono zaza eny imasom-bahoaka. Nilahatra nanao tohi-vakana namonjy ny ivon-toerana Bribie Island filalaovana rano sady fialamboly ireo reny marobe miaraka amin'ireo zaza noana omaly ho fanoherana tanatin'ny filaminana.
Nahazo ny fihainoan'ny Televiziona nasionaly ny hetsika faharoa taorian'ireo tsikera nataon'ny mpanolotra fandaharana maraina:
Zaza amam-behivavy eo ho eo amin'ny 50 no niangona teo anoloan'ny trano misy ny televiziona Channel Seven ao amin'ny kianjan'i Martin ao Sydney androany maraina, manohitra ireo tsikera izay nataon'i David Koch mpanafàna fandaharana ao amin'ny televiziona mikasika ny fampinonoan-dreny.
Azonao jerena eto ireo teboka niaingana amin'ny Seven Sunrise. Azo refesina amin'ny hetsika hita ao amin'ny facebook Sunrise Nurse-in ny fanohanana an-tserasera ataon'ireo mpomba ny fampinonoan-dreny eny imasom-bahoaka, ary anankiray hafa ihany koa noforonon'i Liana Webster Ny zon'ny reny mampinono – na rahoviana na rahoviana, na aiza na aiza, ary amin'ny fomba rehetra. Nanazava ny Sunrise Nurse-in fa tsy valifaty akory ilay fanoherana:
Te hampatsiahy ny rehetra aho, tsy natao hankahalàna ny David Koch akory no anton'izao hetsika izao, fa kosa ho hetsika iray ho fanabeazana. Tena tiako raha mba miova ny toetrany manoloana ny fampinonoan-dreny.
Nanolotra famintinana tsara ilay olana ny The Little Leaf , taorian'ny antson'i Kochie mba “hipirimpirina kokoa”. Toy izao no fijeriny:
Tsy olana na tsara na ratsy ny tao an-tsain'i Kochie tamin'ireny tsikera nataony ireny. Fa ny zavatra nolazainy dia ohatran'ny manohitra ny fampinonoan-dreny imasom-bahoaka. Ny soso-keviny hoe tokony “somary mipirimpirina/miafina” na “mianjaika kely” ny vehivavy dia manamafy ny fahadisoam-pomba fijery hoe tokony hafenina ny fampinonoan-dreny.
Ny 21 Janoary, nampakatra lahatsary nampiseho ny resadresaka tamin'i Amy Ahearn, vehivavy iray mpomba ny fampinonoan-dreny, ny Seven Sunrise, raha naka toerana tao ivelany kosa ny Nurse-in. Efa nihoatra ny 2.200 ny tsikera iny tolakandro iny. Ity tsikera ity sy ireo hafa mitovy amin'izao dia mampiseho fa tsy mandeha ila ny adihevitra:
Ahoana no hasahiany mampiseho ny nonony amin'olon-kafa izay tsy niandry an'izany akory. Ny reny mampinono dia tokony hisintona ny nono ary mampiasa tavoahangy fampinonoana rehefa ivelan'ny trano…. Ary ho anareo rehetra izay milaza “fa raha tsy tianareo dia aza mijery”…rehefa mininginingina manao maloto eo amin'ny zaridainanareo aho, rehefa tsy tianareo dia aza mijery.
Tena mavitrika tokoa amin'ny fanohanana an'i Liana Webster ny Fikambanana Destroy the Joint manohitra ny fanavakavahana ara-pananahana. Ny tanjon'izy ireo: ‘ity pejy ity dia natao ho an'ireo olona mararin'ny fanavakavahana ara-pananahana atao amin'ireo vehivavy ao Aostralia”, ‘na Praiministrantsika izy na vehivavy hafa’. Nanamboatra sary natambatra iray izy ireo misy ny sarin'ireo mpanohana marobe ny fampinonoan-dreny, izay nahazo “tiako” eo ho eo amin'ny arivo hatreto.
Sary natambatry ny Nurse-in. Sary nampindramin'ny Pejy Facebook Destroy the Joint
Mia Freedom, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ilay tranonkala malaza ho an'ny vehivavy, Mamamia, mandrisika ny olona hanatrika ny Nurse-in.
Tsy zavatra ratsy velively akory ny mampatsiahy ny olona ny andro taloha, fony naha-tena lehilahy ny lehilahy ary ireo vehivavy ….takona tanteraka. Fony ny fanpiderana nono no nekena ho karazanà fanintonana ara-pananahana izay neken'ny rehetra. Fony ny hevi-behivavy mampiasa ny nonony hamahanana ny zanany dia….efa fantatrao….naharikoriko. …Ho ela velona ny nono.
Nameno ny Twitter ihany koa ilay adihevitra. Andramo ity tenifototra ity #kochie mba ahazoana ny tsirony rehetra.
3 herinandro izaySamoa